Ifekthri Yokulungisa Igesi Yemvelo | Abakhiqizi Begesi Yemvelo YaseShayina, Abahlinzeki
3 I-MMSCD Efanisiwe Isisetshenziswa Sokuqeda Umzimba Wegesi Yemvelo
Sisebenza ngokukhethekile ekwelashweni kwekhanda likawoyela negesi, ukuhlanzwa kwegesi yemvelo, ukwelashwa kukawoyela ongahluziwe, ukutholwa kwe-hydrocarbon elula, imboni ye-LNG kanye nejeneretha yegesi yemvelo.
Ukususwa Kwamanzi Okwenziwe Ngamagesi Egesi Yemvelo Nge-TEG Iyunithi Yokuphelelwa Umzimba
I-TEG Dehydration isho ukuthi igesi yemvelo ephelelwe amanzi emzimbeni iphuma phezulu kombhoshongo wokumuncwa bese iphuma kuyunithi ngemva kokushintshana kokushisa nokulawulwa kwengcindezi ngokusebenzisa isishintshi sokushisa esinoketshezi oluncane olomile.
Indlela ye-MDEA ye-decarburization skid yemishini yokumisa igesi yemvelo
Ukushushuluza kwegesi yemvelo (i-decarbonization), iyithuluzi elibalulekile ekuhlanzweni noma ekwelapheni igesi yemvelo.
I-PSA decarbonization skid yokuhlanza igesi yemvelo
I-TEG dehydration skid iyisisetshenziswa esibalulekile ekuhlanzeni igesi yemvelo noma ekwelashweni kwegesi yemvelo. I-TEG dehydration skid yegesi ephakelayo ihlanza igesi yemvelo emanzi, futhi umthamo weyunithi ngu-2.5~50x104. Ukunwebeka kokusebenza kungu-50-100% kanti isikhathi sokukhiqiza sonyaka singamahora angama-8000.
Ukusetshenziswa kwe-evaporative crystallization skid ekuhlanzeni amanzi angcolile embonini yokuhlanza igesi yemvelo kudingeka kuhlaziywe kuhlanganiswe nomdwebo wesigaba we-Na2SO4-NaCl-H2O. I-Evaporative crystallization ayiyona nje inqubo yokuhlukanisa usawoti namanzi kuphela, kodwa futhi ingahlanganisa izici zokuncibilika kosawoti ngamunye wezinto ezingaphili ukuze ihlukanise usawoti wezinto ezingaphili ngempumelelo ngesinyathelo ohlelweni lwecrystallization evaporative.
I-skid yokwelapha igesi yomsila
I-skid yokwelapha igesi yomsila wegesi yemvelo isetshenziselwa ikakhulukazi ukubhekana negesi yomsila wensimbi yokutakula isulfure, kanye negesi engcolile ye-liquid sulfur pool kanye ne-TEG yegesi emoshekayo yedivayisi yokuphelelwa amanzi emzimbeni yedivayisi yokubuyisela isibabule.
I-Glycol dehydration yegesi yemvelo
Izinqubo ze-Rongteng glycol dehydration zisusa umhwamuko egesini yemvelo, into yokwelapha igesi yemvelo, esiza ukuvimbela ukwakheka nokugqwala kwe-hydrate futhi ikhulise ukusebenza kahle kwamapayipi.